တပျပကျြနတေဲ့ အာဆငျနယျအတှကျ အိုဇေးလျက အဖွမေဟုတျဘူးလို့ ဂမြေီ ကာရဂေါ ယုံကွညျနေ – Sports A2Z
လီဗာပူးလျရဲ့ ဂန်ထဝငျ ဗဟိုခံစဈမှူးဟောငျး ဂမြေီ ကာရဂေါက အာဆငျနယျနညျးပွ အာတီတာရဲ့ လကျအောကျမှာ အဆိုးရှားဆုံးအခွအေနနေဲ့ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အာဆငျနယျအသငျးအတှကျ အိုဇေးလျက အဖွမေဟုတျဘူးလို့ ယုံကွညျနပွေီး အသငျးအနနေဲ့ ဆူးခငျးလမျးကို ဖွတျသနျးရဦးမယျလို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
အာဆငျနယျရဲ့ ပွိုငျပှဲစုံ လူစာရငျးကနေ ခနျြလှပျခံထားရတဲ့ အိုဇေးလျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ စပါးနဲ့ပှဲမှာလညျး ပါဝငျကစားနိုငျခွငျးမရှိဘဲ ၁၁ ပှဲမှာ ၄ ပှဲသာ အနိုငျရထားပွီး အဆငျ့ ၁၅ နရောမှာ ရပျတညျနရေတဲ့ အာဆငျနယျကို အလှညျ့အပွောငျးအနနေဲ့ အိုဇေးလျကသာ ထမျးတငျပေးနိုငျမယျလို့ အာဆငျနယျပရိသတျတှကေလညျး တဖကျမှာ ယူဆထားကွတာဖွဈပါတယျ။
တိုကျစဈမှာ ဂိုးမိုးခေါငျနတေဲ့ အဓိကပွဿနာကို ခါးသီးပွိုငျဘကျ စပါးနဲ့ပှဲအပွီးမှာ အာတီတာကိုယျတိုငျကလညျး ဝနျခံသှားခဲ့တာပါ။ ကာရဂေါက အာဆငျနယျရဲ့ အကပျြအတညျးနဲ့ပတျသကျလို့ ” အဖွကေ အိုဇေးလျမဟုတျဘူးဗြ။ သူ့ကို အသငျးမှာ ပွနျကစားခိုငျးလိုကျတာနဲ့ ပွလေညျမယျ့ ပွဿနာမဟုတျဘူး” ဆိုတဲ့ အာဆငျနယျယာယီနညျးပွဟောငျး ယှနျးဘတျရဲ့ အဆိုကို ထောကျခံခကျြ ပေးသှားခဲ့ပါတယျ။
” အိုဇေးလျကို နညျးပွ ၃ ဦးသကျတမျးမှာ အဓိက ကစားသမားအဖွဈ မသုံးခဲ့ကွပါဘူး။ ဒါဆို ယှနျးဘတျအပါအဝငျ အူနိုငျး အမျမရီ၊ အာတီတာတို့ နညျးပွ ၃ ဦးစလုံးက မှားနတောလား? နညျးပွတှကေ မရှေးဘူးဆိုရငျတော့ အကွောငျးရငျးတခု သခြောပေါကျ ရှိရပါမယျ။ အိုဇေးလျမှာ အရညျအသှေးမွငျ့တယျဆိုတာကိုတော့ ငွငျးစရာမလိုပါဘူး”
” ဖိအားတှအေောကျမှာ အာတီတာရောကျနကေိုက အသငျးရဲ့ ရယျစရာကောငျးတဲ့ လူချေါမှုအမှားတှေ​ကွောငျ့ပါ။ ဥပမာ ဝီလီယံ၊ ဒေးဗဈလုဇျတို့လို နဝေငျခြိနျရောကျတဲ့ ကစားသမားတှကေို ချေါခဲ့တာပဲ။ ဒါက Kia Joorabchian ရဲ့ လုပျရပျတှဖွေဈတယျ။ ”
” အာတီတာ ချေါခဲ့တဲ့ သောမတျဈ ပါတေးနဲ့ ဂါဘရီယယျလျတို့ကတော့ သိပျကောငျးတဲ့ လူချေါယူမှုတှေ ဖွဈခဲ့တယျ။ ၂၀၁၈ ကစလို့ အာဆငျနယျမှာ မနျနဂြော လေးဦးနဲ့ စီအီးအို ၃ ဦးအထိ အပွောငျးအလဲ ဖွဈခဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ အာတီကာကိုပဲ ဆကျလကျယုံကွညျထောကျခံမှု ပေးပွီး ဆကျသှားသငျ့ပါတယျ။ အာဆငျနယျအတှကျ ဆူးခငျးလမျး နငျးရဦးမှာဆိုတော့ နာကငျြစရာတော့ ကွံ့ကွံ့ခံဖို့ လိုပါတယျ။”’ လို့ ကာရဂေါက လကျရှိမှာ အာဆငျနယျအသငျး တပျပကျြနတေဲ့ အရေးကိစ်စကို သုံးသပျသှားခဲ့ပါတယျ။
ZAWGYI: လီဗာပူးလ်ရဲ့ ဂန္ထဝင် ဗဟိုခံစစ်မှူးဟောင်း ဂျေမီ ကာရေဂါက အာဆင်နယ်နည်းပြ အာတီတာရဲ့ လက်အောက်မှာ အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် အိုဇေးလ်က အဖြေမဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်နေပြီး အသင်းအနေနဲ့ ဆူးခင်းလမ်းကို ဖြတ်သန်းရဦးမယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
အာဆင်နယ်ရဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံ လူစာရင်းကနေ ချန်လှပ်ခံထားရတဲ့ အိုဇေးလ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စပါးနဲ့ပွဲမှာလည်း ပါဝင်ကစားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ၁၁ ပွဲမှာ ၄ ပွဲသာ အနိုင်ရထားပြီး အဆင့် ၁၅ နေရာမှာ ရပ်တည်နေရတဲ့ အာဆင်နယ်ကို အလှည့်အပြောင်းအနေနဲ့ အိုဇေးလ်ကသာ ထမ်းတင်ပေးနိုင်မယ်လို့ အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေကလည်း တဖက်မှာ ယူဆထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်စစ်မှာ ဂိုးမိုးခေါင်နေတဲ့ အဓိကပြဿနာကို ခါးသီးပြိုင်ဘက် စပါးနဲ့ပွဲအပြီးမှာ အာတီတာကိုယ်တိုင်ကလည်း ဝန်ခံသွားခဲ့တာပါ။ ကာရေဂါက အာဆင်နယ်ရဲ့ အကျပ်အတည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ” အဖြေက အိုဇေးလ်မဟုတ်ဘူးဗျ။ သူ့ကို အသင်းမှာ ပြန်ကစားခိုင်းလိုက်တာနဲ့ ပြေလည်မယ့် ပြဿနာမဟုတ်ဘူး” ဆိုတဲ့ အာဆင်နယ်ယာယီနည်းပြဟောင်း ယွန်းဘတ်ရဲ့ အဆိုကို ထောက်ခံချက် ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
” အိုဇေးလ်ကို နည်းပြ ၃ ဦးသက်တမ်းမှာ အဓိက ကစားသမားအဖြစ် မသုံးခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါဆို ယွန်းဘတ်အပါအဝင် အူနိုင်း အမ်မရီ၊ အာတီတာတို့ နည်းပြ ၃ ဦးစလုံးက မှားနေတာလား? နည်းပြတွေက မရွေးဘူးဆိုရင်တော့ အကြောင်းရင်းတခု သေချာပေါက် ရှိရပါမယ်။ အိုဇေးလ်မှာ အရည်အသွေးမြင့်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ငြင်းစရာမလိုပါဘူး”
” ဖိအားတွေအောက်မှာ အာတီတာရောက်နေကိုက အသင်းရဲ့ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ လူခေါ်မှုအမှားတွေ​ကြောင့်ပါ။ ဥပမာ ဝီလီယံ၊ ဒေးဗစ်လုဇ်တို့လို နေဝင်ချိန်ရောက်တဲ့ ကစားသမားတွေကို ခေါ်ခဲ့တာပဲ။ ဒါက Kia Joorabchian ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဖြစ်တယ်။ ”
” အာတီတာ ခေါ်ခဲ့တဲ့ သောမတ်စ် ပါတေးနဲ့ ဂါဘရီယယ်လ်တို့ကတော့ သိပ်ကောင်းတဲ့ လူခေါ်ယူမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၈ ကစလို့ အာဆင်နယ်မှာ မန်နေဂျာ လေးဦးနဲ့ စီအီးအို ၃ ဦးအထိ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အာတီကာကိုပဲ ဆက်လက်ယုံကြည်ထောက်ခံမှု ပေးပြီး ဆက်သွားသင့်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အတွက် ဆူးခင်းလမ်း နင်းရဦးမှာဆိုတော့ နာကျင်စရာတော့ ကြံ့ကြံ့ခံဖို့ လိုပါတယ်။”’ လို့ ကာရေဂါက လက်ရှိမှာ အာဆင်နယ်အသင်း တပ်ပျက်နေတဲ့ အရေးကိစ္စကို သုံးသပ်သွားခဲ့ပါတယ်။
8 Dec ညနခေငျး နောကျဆုံးရ လတျလတျဆတျဆတျ လီဗာပူးလျသတငျးမြား စုစညျးမှု